NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Analytics, Falanqaynta - Tallaabo Hore u Qaad Marwalba ...
Talaabo Horay Usoco Marwalba!
Dardar geli safarkaaga Beddelka Dijital ah NewGenApps
Waxaan mar walba aqoonsannay megatrends goor hore, Mobile, Cloud, Big Data, AI/ML, Blockchain, Learning Deep, NoSQL, IoT, IIoT Analytics and Insights, GraphQL, Containers, Kubernetes, iyo kuwo kale si aan u magacowno dhowr ka mid ah kuwa badan. Dad aad u yar ayaa ku sameeyay xawaaraha iyo miisaanka annaga oo kale!
Waxaan u dhisnaa oo u hormarinnaa shaqada, nolosha iyo isgaarsiinta. Waxaan qaadnaa mashaariic annagoo ku talagalnay inaan helno xalal caqli -gal ah, xal cusub u leh dhibaatooyinka, yar iyo weynba.
Our Core Qiimayaasha
Qiimayaasha aan hayno si aan u samayno aasaaska aan ku qabano shaqada oo aan ku dhaqano nafteena.
Waxaan aaminsanahay inaan leenahay mabaadi'da akhlaaqda iyo akhlaaqda leh oo aan samaynno wax sax ah, iyadoon loo eegayn cidda daawanaysa.
Qofka hindisaha leh waxaa ku dhiirran inuu sameeyo waxyaabo cusub. Haddii aad adigu iskaa wax u qabsato, waxaad diyaar u tahay inaad kaligaa wax qabato.
Socdaalka horumarka togan ee mid kasta iyo hagaajinta xirfad ahaan iyo sidoo kale shaqsi ahaanba.
Haddii aad damacsan tahay inaad wax qabato, waxaa ka go'an inaad fuliso. Haddii aad leedahay ujeedo, waxaad leedahay ujeedo ama ujeedo.
Hirgelinta fikradaha cusub, qaababka cusub iyo fikirka hal -abuurka si loo hagaajiyo sida guud ahaan wax loo qabto.
Maxaa loo doortaa Annaga?
Anaga ahaan, shaqo kaliya ma aha - waxaan ku faannaa xalalka aan bixinno oo aanan ku qanacsanayn ilaa mashaariicdu ay ka gaaraan heerarkeena gaarka ah ee gaarka ah.
Waxaan had iyo jeer ku dadaalnaa inaan ka gudubno rajada macaamiisheenna isla markaana aan la dhisno xiriirro waara oo iyaga la socda.
Waxaan haynaa 900 + macmiil oo adag.
Qaar ka mid ah macaamiisheenna aan la shaqeynay 2008-dii ayaa wali nala shaqeynaya, iyadoo barnaamijyadooda dhowr jeer lagu soo bandhigay App Stores iyo Google Play, baloogyo iyo joornaallo.
Celcelis ahaan, waxaan heysanaa ku dhowaad 80% ku celcelinta ganacsiga.
Waxaan soo saareynay barnaamijyada mobilada tan iyo markii iOS iyo Android markii ugu horeysay loo sii daayay horumariyeyaasha 2008.
Waxaan haynaa koox khibrad leh oo khubaro dhanka warshadaha ah kuwaas oo dib u qaabeyn kara shirkadaada wixii ka horreeya tikniyoolajiyad cusub iyo habab shaqo.
Waxaan gaarsiinay barnaamijyo isku dhafan iyo waliba xalal daruur ah oo ubaahan khibrad domain ah.
Hal dukaan JOOJIN
Waxaan bixinnaa adeegyo badan oo ka yimid naqshadeynta, app-ka mobilada (dhalad, madal-isweydaarsi), horumarinta websaydhka iyo xalalka daruuriga si aadan ugu baahnayn inaad ka raadsato kooxo kale oo kala duwan. Xusuusnow:
Waxaan leenahay khubaro maadada ku xeel dheer (SMEs) oo ku takhasusay teknoolojiyadooda.
Waxaan sidoo kale u adeegnaa daruurinta xisaabinta iyada oo loo marayo Adeegyada Websaydhka Amazon (AWS) si loo siiyo xalal ku kalsoon daruur ku saleysan dhammaan baahiyahaaga ganacsi.
MAAMULKA TALENTIGA AH
Waxaan maal-gashanaa tbarkad ballaadhan oo loogu talagalay shaqaalaheena si ay uga sii horreeyaan baahiyaha tayada iyada oo loo marayo habab qiimeyn joogto ah.
Waxaan si buuxda u baarnaa xubnaha kooxda inta aan shaqaalaysiinayno.
Kooxdayadu waxay si joogto ah uga qaybgalaan shirarka horumarinta (sida WWDC).
Waxaan nafsadeena kula cusbooneysiineynaa horumarka ugu dambeeyay ee teknolojiyadda aan ku shaqeyno.
Waan fahamsanahay haddii maalgashi uusan lahayn ROI togan markaa maalgashiga waa inaan la sameyn.
Tayo sare, xal qiimo jaban iyadoo la adeegsanayo qaabka badda.
Adeegsiga aaladaha casriga ah waxaan hubineynaa inaan abuureyno xaalado guuleysanaya oo waxaad helaysaa RoI sare.
Waxaan raaceynaa wareegga nolosha mashruuca agile iyo la-qabsiga si looga caawiyo kooxdeena inay ka jawaabaan saadaalin la'aan iyadoo loo marayo soo noqnoqoshada caadiga ah.
Waxaan la qabsan karnaa nafteena si aan u bedelno iyo wada shaqeyn heer sare ah.
Haddii aad tahay shirkad bilow ah oo aad rabto inaad aragto sida badeecadaadu isu bedbeddeleyso marxalad kasta, markaa waxaad joogtaa meesha saxda ah. Waad la socon kartaa raad-raacyadaada marxalad kasta oo ka mid ah horumarinteeda.
Xalalka ugu fiican adiga Business
Aad ayaan ugu farxay mashruucayga NewGenApps. Kooxdu waa heer sare. Aad iyo aad bay uga jawaabaan ugana warceliyaan. Waxay weydiiyaan su'aalo muhiim ah waxayna soo jeediyaan talooyin aad u fiican iyadoon loo eegin mawduuca. Had iyo jeer waan ogaa inaan ku jiro gacmo wanaagsan oo aan heli doono dhab ahaan wixii aan weydiistay- ama ka sii fiican. Isgaarsiintu waa, ilaa hadda, NewGenApps hantida ugu weyn. Waxaan had iyo jeer awooday inaan helo jawaab cad oo aftahan ah isla markiiba. Marna ma ahayn inaan sugo ama aan ka jawaabo jawaabta- had iyo jeer isla markiiba way timaaddaa. Kooxdu waxay leedahay anshax shaqo oo cajiib ah waxayna aad u danaynaysaa macaamiishooda. Waxaan gabi ahaanba qorshaynayaa inaan shaqo badan la qabto NewGenApps, oo ku taliya qof kasta oo dhisaya app inuu sidaas oo kale sameeyo. Koox cabsi leh oo soo saarta shaqo tayo leh. Waxaan mar walba isha ku hayn doonaa NGA marka hore mashruuc kasta.
Aad ayaan ugu farxay mashruucayga NewGenApps. Kooxdu waa heer sare. Aad iyo aad bay uga jawaabaan ugana warceliyaan. Waxay weydiiyaan su'aalo muhiim ah waxayna soo jeediyaan talooyin aad u fiican iyadoon loo eegin mawduuca. Had iyo jeer waan ogaa inaan ku jiro gacmo wanaagsan oo aan heli doono dhab ahaan wixii aan weydiistay- ama ka sii fiican. Isgaarsiintu waa, ilaa hadda, NewGenApps hantida ugu weyn. Waxaan had iyo jeer awooday inaan helo jawaab cad oo aftahan ah isla markiiba. Marna ma ahayn inaan sugo ama aan ka jawaabo jawaabta- had iyo jeer isla markiiba way timaaddaa. Kooxdu waxay leedahay anshax shaqo oo cajiib ah waxayna aad u danaynaysaa macaamiishooda. Waxaan gabi ahaanba qorshaynayaa inaan shaqo badan la qabto NewGenApps, oo ku taliya in qof kasta oo dhisaya app uu sidaas oo kale sameeyo. Koox cabsi leh oo soo saarta shaqo tayo leh. Waxaan mar walba isha ku hayn doonaa NGA marka hore mashruuc kasta.
Newgenapps shaqo cajiib ah ka qabtay mashruuceyda. Kooxdu waxay aadday maylkii dheeraadka ahaa ee aagagga oo dhan! Xirfaddooda xirfadeed, xirfadaha farsamada qoto dheer, xirfadaha abaabul ee weyn, isgaarsiinta weyn iyo maamulka kooxda ee khibrada leh ayaa mashruucan ku guulaystay. Wax walba laga soo bilaabo soo jeedinta illaa iyo gaarsiinta kama dambaysta ah - Newgenapps afuufay tartankii. Markii ay soo baxeen caqabado farsamo, kooxdu waxay si dhakhso ah u aqoonsadeen ikhtiyaarrada xallinta ka dibna si cad ayay ula xiriirtay kooxdayada si ay go'aan uga gaaraan ikhtiyaarka ugu fiican. Newgenapps sidoo kale waxay ahaayeen macallimiin waaweyn aagagga aan waayo -aragnimada u lahayn - na socodsiiyey geeddi -socodkii loo baahnaa iyo tallaabooyinka si hawsha si dhakhso leh oo hufan loo qabto. Kani waa shirkad aad ku dhisi karto xiriir aad u dheer oo dheer. Xaqiiqdii waan ku talinaynaa waxaanan rajaynaynaa inaan la shaqayno Newgenapps mashruuceena xiga.
Aynu Dhisno Cajiib!
Ugu dambayntii Blogs
Nov 30 | Automation Sirdoonka
Waa maxay sababta aad u fuliso Imtixaanka Xirfadaha Shaqaalaynta Kahor marka aad shaqaaleynayso
Nov 11 | shaqaalaha shaqaalaha, Human Resources
Nov 11 | ganacsiga la -talinta
Ma jirto hab bus ah oo lagu qeexo kobaca ganacsiga yar: ma waxay la macno tahay dakhliga kordhay? Ama kobcinta macmiilkaaga...
Eeg nooca AMP